Hita fa ady tsy vita | NewsMada
Hita fa ady tsy vita
Par Taratra sur 15/01/2021
Efa nahina? Na nampoizina amin’izay efa nampitandremana… Tsy inona fa ny firongatry ny valanaretina covid-19 amin’izao. Tsy efa talohan’ny Krismasy sy ny fetin’ny faran’ny taona no maro ny tsy mihevitra na manao antsirambina ny fiarovan-tena amin’ny fanajana ireo fepetra sakana?
Mitombo isa ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina coronavirus, mitombo isa ny marary, mitombo isa ny ao anatin’ny fahasarotana… Akory atao? Tsy fandatsana, sanatria, fa mby amin’ny hoe: soa lavo, hahay mamindra; soa kenda, hahay mitsako? Fieritreritra amin’izay mahasoa…
Tsy fandatsana amin’ny fahavoazana sy ny fahasahiranana, sanatria fa fandatsahana ao an-tsain’ny tsirairay fa mbola tsy resy tosika ny valanaretina. Faritra 14 amin’ny 22 no ahitana azy amin’izao, ary Faritra efatra no tena maro: Analamanga, Boeny, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany…
Tsara ratsy, tsy mbola miditra amin’ny fihanaky ny valanaretina andiany faharoa toy izay any amin’ny firenen-dehibe sasany i Madagasikara. Tsy vitan’izay, tsy mbola hita eto koa ny sehon’aretina amin’ny endriny vaovao hoe mafimafy sy sarotra kokoa no ho ny voalohany. Tsy misy maniry izany.
Na izany aza, izay indrindra no itandremana dieny mbola tsy tonga tokoa ny tokoa. Tsy ny tandrevaka kely nataon’ny olona vitsivitsy tamin’ny fetin’ny faran’ny taona teo ve, ohatra, no mahatonga fahavoazana lehibe ho an’ny maro amin’izao hoe mirongatra indray ny valanaretina covid 19 izao?
Ny miaro tena hiarovana ny hafa amin’ny fanajana fepetra sakana no atao amin’izao: fanaovana arovava, fanasan-tanana matetika, fanajana ny elanelana iray metatra, tsy fandrorana etsy sy eroa… Ampahatsiahivina indray ve fa tsy hita maso ny tsimokaretina, tsy mifidy olona, mamono… ?
Sao ny tena ihany, sanatria, no mila loza? Tsy iza na tsy inona fa ny atao ihany no mahasoa na maharatsy. Nefa rehefa voa ka hoe haverina, ohatra, ny fihibohana: iza na inona no homen-tsiny hanilihana ny vokatry ny tsy fitandremana? Na hanamarinan-tena amin’izay hita izao fa ady mbola tsy vita.